आम्दानी कम लगानी बढी भएपछि परिचय बदल्दै जुट कृषक « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
पथरी, मोरङ, २५ असोज । मोरङको कटहरी–९ का भुपेन्द्र कार्कीले जुटखेती गर्न छोड्को करिब दुई वर्ष भयो ।
पाँच बिगाहामा जुट लगाउनुभएका कार्कीले लगानी बढी आम्दानी कम भएपछि जुट अर्थात (पट्वा) खेती लगाउन छाड्नु भएको हो । कार्की यतिबेला धानखेती गर्दै आउनुभएको छ ।
जुटखेतीमा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि धानखेती गर्न थाल्नुभएको हो । यतिखेर उहाँलाई स्थानीय मानिस धान उत्पादक कृषक भनेर चिन्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “आम्दानीभन्दा लगानी बढी छ, जुटखेती गरेर फाइदा हँुदैन के गर्नु ?
उहाँमात्र होइन मोरङको शिसवानी बडहराका महोनलाल महतोले पाँचवर्ष अघिसम्म नौ बिगाहा जमिनमा जुट अथवा (पट्वा) खेती गर्नुहुन्थ्यो । तर जुटखेतीबाट फाइदा नभएपछि उहाँले पनि धानखेती नै गर्न थाल्नुभयो ।
जुट उत्पादन गर्दै आएका किसानको परिचय बदलिएको छ । उहाँलाई जुट किसानभन्दा पनि धानखेती गर्ने किसान भनेर चिन्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “बिना फाइदा जुटखेती गरेर के गर्ने ? मोरङमा एक हजार हेक्टरमा जुटखेती भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।